KABARY AN’ANDRIAMATOA MINISITRY NY TOEKARENA SY NY TETIPIVOARANA AMIN’NY FANKALAZANA NY ANDRO IRAISAM-PIRENENA HO AN’NY MPIROTSAKA AN-TSITRAPO – Direction Générale de l'Economie et du Plan
KABARY AN’ANDRIAMATOA MINISITRY NY TOEKARENA SY NY TETIPIVOARANA AMIN’NY FANKALAZANA NY ANDRO IRAISAM-PIRENENA HO AN’NY MPIROTSAKA AN-TSITRAPO
Posted On: 11 décembre 2018
Andriamatoa Minisitry ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny Andrim-panjakana,
Madame le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies à Madagascar
Andriamatoa sy Ramatoa Sekretera Jeneraly isany,
Andriamatoa sy Ramatoa Tale Kabinetra isany,
Andriamatoa Tale isany sy ianareo olona manan-kaja nasaina
Ianareo rehetra mpilatsaka an-tsitrapo izay vory manatrika etoana,
Voalohan-teny dia miarahaba antsika rehetra tonga manatrika eto nahatratra izao andro iraisam-pirenena momba ny firotsahana an-tsitrapo izao, izahay ato amin’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Tetipivoarana izay soloako tena etoana. Ary voninahitra lehibe ho anay ny fandraisana izany fankalazana izany eto amin’ny Minisitera.
Ankalazaina androany tokoa ny andro iraisam-pirenena momba ny firotsahana an-tsitrapo ary betsaka ny firenena no mankalaza izany. Toy ny isan-taona dia tsy diso anjara amin’izany koa isika eto Madagasikara ary ataon’ny Fanjakana ho vaindohan-draharaha ny fanomezan-danja ny firotsahana amin’ny asa an-tsitrapo, amin’ny alalan’ny Minisiteran’ny Seraserasera sy ny Fifandraisana amin’ny Andrim-panjakana, izay arahabaina manokana etoana.
Ianareo ao amin’ny Ministeran’ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny Andrimpanjakana tokoa no lohany iadian’ny vovonana amin’ny fampandehanana sy fandrindrana ny asa an-tsitrapo eto Madagasikara.
Betsaka ny mihevitra fa asa tsotra ny asan’ny mpilatsaka antsitrapo, nefa dia mitaky adidy sy andraikitra mavesatra ary fahafoizan-tena izany. Mitaky herim-po sy herin-tsaina ary fahavononana ihany koa, noho izy tsy sandaina vola na karama mba ho fanompoana ny mpiara-monina sy ny mpiara-belona aminy.
Raha izahay eto amin’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Tetipivoarana manokana dia midera ny herimpo sy herin-tsaina ananan’ireo mpilatsaka antsitrapo ireo sy ny asa vitan’ny Minisiteran’ny Seraserasera sy ny Fifandraisana amin’ny Andrim-panjakana momba izany.
Raha zohina tokoa ny asa vitan’izy ireo teto amin’ny Firenena dia hita fa tena goavana tokoa. Singanina manokana ireo fanentanana ny olona nandritra ireny Fanisana ankapoben’ny mponina sy ny trano fonenana, izay fantatry ny rehetra tamin’ny anarana hoe “RGPH3” na koa hoe “Recensement Général de la Population et de l’Habitat”. Tsy vitan’izany fa manolo-tanana ireo mpilatsaka an-tsitrapo amin’ny sehatry ny fanabeazana sy ny fahasalamana. Ohatra amin’izany ny fanentanana ny olona mba hanangan-tsaina rehefa tonga ny fetim-pirenena; ny fanentanana ny mpiara-belona nandritra ny fiparitahan’ny valan’aretina pesta sy ny fanomezan-drà. Tsy adino ny asa fankaherezana sy fanampiana ireo traboina mandritra sy aorian’ireny vanimpotoanan’ny rivo-doza ireny, sy ny sisa tsy ho voatanisa. Ireo rehetra ireo dia teo ambany fitariahan’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny Andrimpanjakana avokoa.
Notanterahin’izy ireo tokoa ny soatoavina maha Malagasy hoe: “Aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana” mba ho fanasoavana ny mpiara-belona.
Ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Tetipivoarana dia manana mpilatsaka antsitrapo mavitrika ary mandray anjara amin’izay rehetra voatanisa tetsy aloha mba ho fiaraha-miasa amin’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny Andrimpanjakana.
Mazava ny lohahevitra izay entintsika mankalaza izao vaninandro lehibe amin’ity taona 2018 ity izao hoe: “MANORINA FIARAHAMONINA MAHATSANGY”, izay adika amin’ny teny vahiny hoe: “construire une communauté resiliente”.
Raha io loha-hevitra io tokoa manko no dinihina dia manaporofo fa manana andraikitra amin’ny fampivoarana sy fampandroasoana ny firenena ny asa firotsahana antsitrapo, na eo amin’ny lafiny ara toe-karena izany na eo amin’ny lafiny ara-tsosialy .
Arak’izany dia mifanaraka tsara ao amin’ny Zotra faha-4 ao amin’ny Paikady Natao Din’asa (na ny Axe 4-n’ny Plan National de Développement), izay manome lanja ny “Mahaolona ho amin’ny Fampandrosoana” ary koa mifanindran-dalana amin’ny Tanjon’ny Fampandroasoana Lovain-jafy na ny ODD, ny asa firotsahana an-tsitrapo.
Asa goavana tokoa ny asa miandry anareo mpilatsaka antsitrapo ary izany dia ho fanasoavana ny mpiray tanidrazana aminareo ihany. Koa eto ary izahay ato amin’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Tetipivoarana dia manamafy hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny Andrimpanjakana sy aminareo mpilatsaka antsitrapo. Tazony hatrany ny fahavononana, ny herin-tsaina sy herim-batana efa nananareo hatramin’izay mba hoentina hampivoatra sy hanatsarana ny fiainan’ny vahoaka Malagasy ary koa mba hahatonga ny mpilatsaka antsitrapo Malagasy tsy hitsanga-menatra eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Iray ihany no tanjona hotratrarina dia ny fampandrosoana ity Firenena malalantsika ity. Ary izany no anasako anareo mba handray anjara amin’ny fanentanana sy famporisihana ny olona mba hamita ny adidiny amin’izao fifidianana izao, mba hahatsapan’ny olom-pirenena fa ny safidiny no antoky ny ho avin’ny Madagasikara.
Eto ampamaranana ary, Tompokolahy sy Tompokovavy, dia mirary soa anareo izahay eto amin’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Tetipivoarana mba hahatontosa antsakany sy andavany ny fankalazana izao andro iraisam-pirenena momba ny firotsahana antsitrapo, izay ankalazaina androany izao.
Mamporisika sy mankahery ihany koa anareo Komity mpikarakara miankina na tsy miankina amin’ny Fanjakana, izay tarihin’ny avy ao amin’ny Ministeran’ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny Andrim-panjakana amin’ny asa izay mbola miandry anareo.